Vanhu Votyira Hutano Hwavo Sezvo Kanzuru yeHarare Yoronga Kuvhara Mvura
Kanzuru yeHarare inoti ichatanga chirongwa chekumbomira kupa vagari mvura mamwe mazuva sezvo yave shoma mumadhamu.
Dzimwe nzvimbo dzinonzi dzichatora mazuva mashanu dzisingawane mvura izvo zvoita kuti vagari uye vana chiremba vatyire kuti zvirwere zvinogona kupararira. Dambudziko iri riri kuwanikwa nemakanzuru eBulawayo neChitungwiza.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vati nyaya yekushaya mvura kwemamwe mazuva imviro mviro yekutanga kwekupararira kwezvirwere zvakaita setyphoid.
Vagari vemumusha wevazhinji weWarren Park vanoti vagara vachinetseka kuwana mvura uye vave kutokatyamadzwa kuti danho idzva rokuvhara mvura rinorevei.
Muzvare Shandurai Zireva anoti madzimai nevanasikana ndivo vanoiswa parumananzombe zvakanyanya nekushomeka kwemvura.
VaDonald Mavhudzi mumwe mugari wemuHarare vatiwo kanzura inofanirwa kutsvaka nzira dzekuzadzikisa kodzero yekuwanisa vanhu mvura yakachena iri mubumbiro remutemo.
Amai Cecelia Mhondiwa vachema chemawo vakati sevanhukadzi kushaikwa kwemvura kuri kuvakonzeresa hurombo sezvo nguva zhinji vanenge votsvaka mvura pachinzvimbo chekubata mabasa emaoko. Vati kanzura inofanirwa kutsvaka nzira dzekuwanisa vanhu mvura.
Hapana kuwiriran kuti chii chichaitwa mazuva anenge achishaikwa mvura. Vagari vanoti kanzuru inofanira kuunza motokari dzinotakura mvura kumisha yevanhu. Asi mutauriri weHarare City Council VaMichael Chideme vanoti vanhu vanofanira kuchereredza mvura.
Vanotungamira sangano reCombined Harare Residents Association VaMfundo Mlilo vanoti hurumende nekanzuru vanofanira kutenda kuti mutoro wekuwanira vanhu mvura wavaremera kuti vape masangano ekunze mukana wekubatsira.
Kumisha mizhinji inogara vanhu muHarare, zvibhorani zvishoma zviriko zvakaiswa nemasangano akazvimiririra asi nekuda kwekuwandirwa nekushandiswa zvakanyanya, zvibhorani izvi zvinofa nguva zhinji uye hakuna anogadzira.
Muna 2009 vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakashaya nekuda kwechirwere cheCholera.
Vana vakawanda vanombofa nezvirwere zvemanyoka. Vana chiremba vakawanda vari kuchema chema kuti kuzvipatara zvakawanda hakuna mishonga nekudaro pakaita zvirwere zvinogona kupararira nekukurumidza.